फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोनलाई झट्का, संसदमा बहुमत गुमाएपछि अब के होला ?
काठमाडौँ । इमानुएल म्याक्रोन राष्ट्रपतिमा पुन: निर्वाचित भएको दुई महिना भन्दा कम समय बितिसकेको छ र उनले नेशनल एसेम्बलको नियन्त्रण गुमाएका छन् । वामपन्थी र अति दक्षिणपन्थी गठबन्धनको ठूलो जितका कारण यस्तो भएको हो । आइतबारको दोस्रो चरणको चुनावी नतिजामा म्याक्रोनलाई ठूलो धक्का लागेको छ ।
म्याक्रोनले ठोस बहुमतका लागि मतदाताहरूलाई अपील गरेका थिए, तर मध्यवादी गठबन्धनले चुनावमा दर्जनौं सीटहरू गुमाए र फ्रान्सेली राजनीतिमा नयाँ वातावरण बनेको छ । हालै, एलिजाबेथ बोर्न, जो म्याक्रोनद्वारा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो, यो अवस्था अप्रत्याशित भएको बताएकी छन् ।
राष्ट्रपति निवासबाट एलिजाबेथ घर फर्किनेबित्तिकै पेरिसको राजनीतिमा आँधी मच्चियो । आधुनिक फ्रान्सले यस्तो नेशनल एसेम्बली कहिल्यै नदेखेको उनले बताइन् । उनले भनिन्- 'यस्ता अवस्थाहरू हाम्रो देशका लागि जोखिमपूर्ण छन् । यसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समस्या खडा गर्नेछ । हामी भोलि साधारण बहुमत ल्याउने प्रयास गर्नेछौं ।'
तर, संसदमा रहेका अन्य दुई ठूला समुहले पनि गठबन्धनमा चासो लिएको देखिएकाले यो बहुमतको सम्भावना पनि नगण्य देखिन्छ । अर्थमन्त्री ब्रुनो ले मेयरले बहुमत प्राप्त गर्न धेरै सोच्नु पर्ने बताएका छन् ।
उही समयमा, बामपन्थी नेता जीन-लुइस मेलेन्चन सबै मूलधारका वामपन्थी दलहरूलाई कम्युनिष्ट र ग्रीन्ससँग गठबन्धनमा ल्याउन सफल भएकोमा खुसी छन् । यो गठबन्धनको नाम नुप्स (NUPPS) राखिएको छ। उनले राष्ट्रपतिको पार्टी पूर्ण रूपमा पराजित भएको र अब सबै सम्भावना आफ्नो हातमा रहेको आफ्ना समर्थकलाई बताए ।
यसैबीच मरीन ले पेन र उनको अति दक्षिणपन्थी नेसनल र्‍याली पार्टी पनि आठ सिटबाट ८९ मा पुगेपछि हर्षित मुडमा थिए। 'इम्यानुएल म्याक्रोनको साहसिक कार्य समाप्त भएको छ र अब उनको सरकार अल्पमतमा सिमित भएको छ । उनले भनिन् ।
यदि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले अब बहुमत प्राप्त गर्न दक्षिणपन्थी रिपब्लिकनतर्फ फर्के भने यसले राम्रो सन्देश दिनेछैन । पार्टीका अध्यक्ष क्रिस्चियन जाकोबले फ्रान्सेली चरमपन्थीहरूलाई परास्त गरेको परिणाम भोग्दै आएका राष्ट्रपतिका लागि यो नतिजा 'स्टिङिङ असफलता' भएको बताए ।
संवैधानिक कानूनका प्राध्यापक डोमिनिक रुसोले म्याक्रोनको बारेमा भने- 'उनी अब बलियो छैनन् । म्याक्रोनका लागि यी पाँच वर्ष सम्मान र संसदीय तहमा सम्झौता गर्न मात्र खर्च हुनेछ ।'
दुई महिनामा परिस्थिति फेरियो
अप्रिलमा म्याक्रोन मरिन ले पेनलाई हराएर दोस्रो पटक राष्ट्रपति बन्दा वातावरण फरक थियो । तिनीहरूसँग ३०० भन्दा बढी सीटहरू थिए तर बहुमत कायम राख्न २८९ सिट आवश्यक थियो । तर, अहिले उनीहरुसँग २४५ सिट मात्रै छ ।
आधाभन्दा बढी मतदाताले मतदानमा भाग लिएनन् र मतदान प्रतिशत ४६.२३ प्रतिशत मात्रै रह्यो । मतदाताहरूले अति दक्षिणपन्थी राष्ट्रिय र्‍याली पार्टी र वामपन्थी दलहरूको गठबन्धन नुप्सलाई समर्थन गरेका छन् ।
आफ्नो सीट गुमाउने मन्त्रीहरूमा स्वास्थ्य मन्त्री ब्रिजिट बोर्गोइन पनि छन् । उनी आफ्नो अति दक्षिणपन्थी प्रतिद्वन्द्वीसँग ५६ मतले पराजित भएकी थिइन् । यसबाहेक हरित संक्रमण मन्त्री अमेले डे मोन्चालिनले पनि हार बेहोरेका छन् । तर, युरोपेली मन्त्री क्लेमेन्ट बीनले पहिलो राउण्डमा पछि परे पनि आफ्नो सिट बचाए ।
नेशनल एसेम्बलीका अध्यक्ष रिचर्ड फेरान्ड, इमानुएल म्याक्रोनका नजिकका सहयोगीहरू पनि नुप्स गठबन्धनका विपक्षीसँग पराजित भए । यसबाहेक ग्वाडालुपे टापुमा पनि विदेशमन्त्री जस्टिन बेनिनले हार बेहोरेका छन् ।
जितपछि वामपन्थी नेता मेलेनचोनले यो नतिजा ‘म्याक्रोन’ को लागि नैतिक पराजय भएको बताए । मेलन्चोनले अब यो लडाईमा आफ्नो भूमिका परिवर्तन गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘मेरो प्रतिबद्धता जुनसुकै पदभन्दा माथि छ र अन्तिम साससम्म रहनेछ ।
पाँच वर्षअघि इमानुएल म्याक्रोनले आशाको लहर सिर्जना गरेका थिए र उनले नयाँ अनुहारलाई मैदानमा उतारेका थिए । यसपटक यी नयाँ अनुहारलाई एनयुपीएस गठबन्धन र राष्ट्रिय जुलुस पार्टीले दिएको हो ।
यी परिणामहरूका कारण, म्याक्रोनको पार्टीले अब संसदमा प्रतिद्वन्द्वीहरूसँग गठबन्धन गर्ने बारे विचार गर्नुपर्नेछ । अब म्याक्रोनलाई कुनै नयाँ कानून पारित गर्न पनि गाह्रो हुन सक्छ ।
म्याक्रोनको सुधारमा के खतराहरू छन् ?
म्याक्रोनले देशमा बढ्दो मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने वाचा गरेका थिए तर उनका प्रतिद्वन्द्वीहरू यस विषयमा पूर्णतया फरक धारणा राख्छन् । म्याक्रोनले ल्याएका ठूला प्रस्तावहरूमा लाभ योजना सुधार, कर कटौती र सेवानिवृत्तिको उमेर ६२ बाट बढाएर ६५ वर्ष पुर्‍याउने छन् ।
उनको निवृत्तिभरण उमेर सुधार गर्ने प्रस्तावको बाटो पनि धेरै गाह्रो छ, यद्यपि उनले रिपब्लिकन समर्थन प्राप्त गर्न सक्छन् ।
यो कार्बन तटस्थता र पूर्ण रोजगारको लागी प्रस्तावहरुद्वारा पछ्याइएको छ । उनले भर्खरै शासनको 'नयाँ तरिका' पनि सुझाव दिएका थिए, जसमा उनले पुनर्स्थापनाका लागि राष्ट्रिय परिषद् गठन गर्न आह्वान गरेका थिए । फ्रान्सलाई थप लोकतान्त्रिक बनाउन स्थानीय जनतालाई यसमा समावेश गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
भिएनएल- फ्रान्सको दबदबा कायम
काठमाडौं । नेसन्स भलिबल लिगमा ओलम्पिक च्याम्पियन फ्रान्सले आफ्नो दबदबा कायम राखेको छ । शनिबार राति समापन भएको पुरुषतर्फको खेलमा जापानलाई ३-० को सोझो सेटमा पराजित गर्दै फ्रान्स २१ अंकसहित शीर्षस्थानमा छ । फ्रान्सले
अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री फ्रान्सका राष्ट्रपतिलाई भेट्दै
क्यानर्बेरा । अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजले फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँसँग सम्बन्ध ‘पुनः स्थापित’ गर्ने प्रयासमा उनलाई भेट्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री अल्बानीजले बिहीबार राति आफूले राष्ट्रपति म्याक्रोँको फ्रान्स भ्रमणको निमन्त्रणा स्वीकार
काठमाडौँ । इमानुएल म्याक्रोन राष्ट्रपतिमा पुन: निर्वाचित भएको दुई महिना भन्दा कम समय बितिसकेको छ र उनले नेशनल एसेम्बलको नियन्त्रण गुमाएका छन् । वामपन्थी र अति दक्षिणपन्थी गठबन्धनको ठूलो जितका
फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोनले संसदमा गुमाए बहुमत
काठमाडौँ । राष्ट्रपतिमा पुनः निर्वाचित भएको दुई महिनाभन्दा कम समयपछि फ्रान्सेली संसद नेसनल एसेम्ब्लीमा इमानुएल म्याक्रोनले बहुमत गुमाएका छन् । निर्वाचनमा वाम गठबन्धन र अति दक्षिणपन्थीहरूको दमदार प्रस्तुतिपछि राष्ट्रपति म्याक्रोनले